ခေါကျဆှဲ ခကျြနညျး ၂မြိုး - Latest Myanmar News
ခေါကျဆှဲ ခကျြနညျး ၂မြိုး
July 20, 2021 by Latest Myanmar News
ကျောရညျခေါကျဆှဲ ခကျြနညျးလေးပါ အဆငျပွအေောငျ (2) နညျးတငျပေးထားပါတယျနျော
ကျောရညျခေါကျဆှဲ လုပျတော့မယျဆိုလြှငျ ဂြုံခေါကျဆှဲခွောကျ ၊ ကွကျသား ၊ မှိုခွောကျ ၊ ပနျးခွောကျ ၊Sausage(ကွိုကျလို့တမငျထညျ့တာပါ၊ သာမနျအားဖွငျ့မထညျ့စားတတျကွပါဘူး ) ၊ ကျောမှုနျ့ ၊ ဘဲဥ ၊ ကနျစှနျးရှကျ ၊ ပဲငံပွာရညျ ၊ ဆား ၊ သကွား နဲ့ ရတေို့ အဓိက လိုအပျပါတယျ ။ ငရုပျကောငျး ၊ ကွကျသှနျကွျောနဲ့ ငပိထောငျးလညျး လိုအပျပါသေးတယျ ။
ပထမဆုံး ဂြုံခေါကျဆှဲခွောကျကို ပြော့အိလာစဖေို့ ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ရထေဲ ခဏနှဈထားပေးရပါမယျ ။
ကိုယျကွိုကျတဲ့ အနထေား အပြော့မာကိုကွညျ့ပွီး ခေါကျဆှဲကို ပွနျဆယျထားကာ …ရအေေးထဲ နှဈပွီး ခဏ အအေးခံထားရပါမယျ ။
ကြှနျမကတော့ ရအေေးနဲ့ အအေးခံတဲ့အပွငျ ၊ ရအေေးထဲက ဆယျပွီးသား ခေါကျဆှဲကို စကာထဲထညျ့ပွီး …ရခေဲတုံးတှပေါ ခေါကျဆှဲပျေါတငျပွီး … အအေးခံထားလိုကျပါတယျ …. ။
အဲ့လိုမှ အအေးမခံလြှငျ ၊ ခေါကျဆှဲတှလေုံးထှေးပွီး ကပျကုနျနိုငျတာကွောငျ့ပါနျော ။
ပွီးတာနဲ့ ဟငျးရညျအတှကျ ကွကျသားကို …ပဲငံပွာရညျ ၊ ဆား ၊ သကွားနယျပွီး … နူးနအေောငျ ပွုတျပေးရပါမယျ ။ ကွကျသားနူးပွီဆိုလြှငျ အသားတှကေို ဆယျပွီး အတုံးသေးလေးတှဖွေဈအောငျ နုတျနုတျစငျးပေးရပါမယျ ။
ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ကွကျပွုတျရညျထဲကိုစငျးထားတဲ့အသားတုံးတှပွေနျထညျ့ ပွီးလြှငျကျောမှုနျ့ကို ရနေဲ့ ဖြျောပွီး လိုသလောကျထညျ့ကွရပါမယျ ။
အဲ့ဒီနောကျ မှိုခွောကျ ၊ ပနျးခွောကျနဲ့ ၊ sausage တှကေိုလညျး လိုသလောကျလေးထညျ့ပေးရပါမယျ …
ပွီးတာနဲ့ ကွကျဥ နှဈလုံးကို အကာရော ၊ အနှဈပါရောမှထေားတဲ့ အရညျကို ….ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ဟငျးအိုးထဲ ဇှနျး တဈဇှနျး နဲ့ .. ဖွညျးဖွညျး ခငျြး လောငျးထညျ့ပေးရပါမယျ ။ ဒါမှသာ ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ အိုးထဲ ကလြာတဲ့ ဘဲဥအရညျက အမြှငျလေးတှေ ဖွဈစမှောပါ ။
ဆား ၊ သကွား လိုသလောကျထညျ့ပွီးတာနဲ့ … ငရုပျကောငျးလေးနညျးနညျး ဖွူးထညျ့ပေးကွရပါမယျ ။
ငရုပျကောငျးနံ့လေးမှေးလာတာနဲ့ ဟငျးရညျအိုးကို မီးပိတျပွီး ကနျစှနျးရှကျတှကေို အပျေါက ဖွနျ့ထညျ့ ၊ အဖုံး ပွနျအုပျထားရပါမယျ ။(တဈခြို့က ငရုပျကောငျးကို ပနျးကနျထဲရောကျမှ လိုသလိုလညျး ထညျ့စားတတျကွတယျ) ။
ဟငျးအိုးမီးပိတျပွီးမှ ၊ ကနျစှနျးရှကျကို နောကျဆုံးမှ ထညျ့တာ ၊ စိမျးနအေောငျလို့ပါ ကနျစှနျးရှကျ နှမျးသှားလြှငျ စားခငျြစရာမကောငျးတော့လို့ပါ ။
သုံးမိနဈလောကျကွာတာနဲ့ ဟငျးရညျအိုး အပူရှိနျကွောငျ့ ကနျစှနျးရှကျလညျး စားလို့ ရတဲ့ အနထေား ရောကျပါပွီ ။ဒါဆိုလြှငျ ကျောရညျခေါကျဆှဲ အတှကျ ဟငျးရညျခကျြလို့ ပွီးပါပွီ ။
ကျောရညျခေါကျဆှဲနဲ့တှဲဖကျစားရတဲ့ ငပိထောငျးလေးအကွောငျးလညျး နညျးနညျး ပှားပါဦးမယျ … ။ ငပိထောငျးလုပျဖို့ ၊ မြှငျ ငပိ ၊ ကွကျသှနျဖွူ ၊ ငရုပျသီးစိမျး ၊သံပုရာသီး ၊ ငရုပျသီးမှုနျ့ နညျးနညျးနဲ့ … ၊ အသားမှုနျ့ နညျးနညျး လိုပါတယျ ။
ပထမဆုံး မြှငျ ငပိကို ကငျရပါမယျ ။ ကငျတဲ့ နရောမှာ တူးနအေောငျမကငျပဲ ၊ မကျြနှာပွငျ နီရဲပွီး ၊ ငပိနံ့လေးထှကျလာလြှငျရပါပွီ။ ပွီးတာနဲ့ကွကျသှနျဖွူနဲ့ငရုပျသီးစိမျးကို ကွညေကျနအေောငျ ထောငျးထားရပါမယျ ။
ငရုတျသီးစိမျးကိုတော့ မထောငျခငျ အရငျဆုံး အညှောငျ့ခြှပွေီး ၊ ဒယျအိုး အပူထဲ ထညျ့လှျောပေးရပါမယျ ။ လှျောနတေုနျး မီးအရှိနျနဲ့ ငရုတျသီးက ထပေါကျပွီး စငျတတျတဲ့အတှကျ မကျြစိထဲမဝငျအောငျ သတိတော့ထားလှျောရမှာပါ ။
အဲ့ဒီငရုပျသီးနဲ့ ကွကျသှနျဖွူကို လိုသလောကျရောပွီးထောငျးရပါမယျ ။ ကွညေကျလာတာနဲ့ငပိကိုပါ ထပျပေါငျးထညျ့ထောငျးပေးရပါမယျ ( ငပိထောငျးပိုပွီးစားလို့ကောငျးဖို့ ပုစှနျခွောကျလေး နညျးနညျးပါထညျ့ထောငျးလြှငျ ပိုကောငျးပါတယျ )
ငရုပျသီးအကကျြမှုနျ နဲ့ ၊ အသားမှုနျ့တို့ကိုပါ ရောထောငျးပွီးပွီဆိုလြှငျ ၊ ငပိထောငျးလညျး စားဖို့ အသငျ့အနထေားရောကျပါပွီ ။ သံပုရာသီးကိုတော့ စားခါနီးမှ ငပိထောငျး အပျေါကနေ အရညျညှဈပွီး တှဲစားပေးရမှာပါ ။ အဲ့လိုမှ မဟုတျလြှငျ သံပုရာရညျက ခဉျြအရသာထကျ ၊ ခါးဖနျ့ဖနျ့ အရသာ ဘကျကို ပွောငျး သှားနိုငျလို့ပါပဲ ။
လတျဆတျတဲ့ သံပုရာနံ့လညျး မမှေးတော့တာကွောငျ့ပါ ။ အားလုံးလညျးပွငျဆငျပွီးလို့ စားဖို့ အသငျ့အနထေားရောကျပွီဆိုတော့ …. ၊ အအေးခံပွီးရစေဈထားတဲ့ ခေါကျဆှဲကို အလြှငျထညျ့ရပါမယျ ၊ ပွီးတာနဲ့ ခကျြထားတဲ့ ကျောရညျကိုလောငျးထညျ့ပွီး ၊ အပျေါက ကွကျသှနျဆီခကျြလေး ဖွူးပေးလိုကျလြှငျ အိုကပွေီပေါ့နျော ။
၀ကျ/ကွကျ/ဘဲ ကွိုကျနှဈသဈရာအသား၊ ကျောမှုနျ့၊ ငရုတျကောငျးမှုနျ့၊ မုနျညငျး၊ ပနျးဂျေါဖီ၊ ပဲပငျပေါကျ၊ တရုတျနံနံ၊ ဆား၊ သကွား၊ အခြိုမှုနျ့၊ ခငျြး၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ငရုတျသီးစိမျး၊ ငါးပိစိမျးစားနဲ့ သံပုရာသီးတို့ပါနျော။
ပထမအဆငျ့အနနေဲ့ အသားအရိုးတှဲလကျြကို သနျ့စငျအောငျရဆေေးပွီး အတုံးခပျကွီးကွီးတုံးပွီး ဆား၊ သကွား၊ အခြိုမှုနျ့၊ ခငျြးထောငျးရညျတို့နဲ့နယျပွီး ခဏနှပျထားပေးပါနျော။ ပွီးတော့မှ အိုးတဈလုံးထဲထညျ့ပွီး အသားတှကေိုထညျ့၊ ရကေိုလညျး အသားမွုပျရုံထညျ့ပွီး ပွုတျပေးထားပါနျော။
ပထမတဈရခေမျးလောကျပွီဆိုရငျတော့ အသားတှကေို ဟိုဘကျဒီဘကျလှနျပွီးတော့ ရထေပျထညျ့ပွီး တညျပေးပါ။ အသားနူးလောကျပွီဆိုရငျတော့ အိုးထဲကနေ အသားတှကေိုဆယျ၊ အအေးခံပွီး အသားနှငျပေးထားပါနျော။ ကျောမှုနျ့ကိုတော့ စားမယျ့လူရယျ၊ ကျောရညျအပဈြအကြဲအကွိုကျပျေါ မူတညျပွီး ဖြျောပေးပါနျော။
ကျောမှုနျ့ဖြျောတဲ့အခါမှာ ဆား၊ သကွားနဲ့ အခြိုမှုနျ့လေးနညျးနညျး ထညျ့ဖြျောပေးပါ။ မုနျညငျး၊ ပဲပငျပေါကျ၊ ပနျးဂျေါဖီတို့ကိုလညျး ရနေဲ့သသေခြောခြာ အထပျထပျဆေးပွီး လှီးခြှတျရစေဈထားပေးပါနျော။ ငါးပိစိမျးစားကိုလညျး မီးလေးအုံးထားပေးပါ။ ငရုတျသီးစိမျးကိုလညျး ရဆေေးထားပါ။ ကွကျသှနျဖွူနီတို့ကိုလညျး အခှံနှာပွီး ဆီခကျြခကျြဖို့ ပါးပါးလှီးပေးထားပါ။
ခေါကျဆှဲပွုတျခွငျးအားလုံးအသငျ့ဖွဈပွီဆိုရငျတော့ အိုးတဈလုံးထဲ ရထေညျ့ပွီး မီးဖိုပျေါတငျပွီး ရနှေေးအိုးတညျပါ။ ရနှေေးဆူပွီဆိုရငျ ခေါကျဆှဲ/ကွာဇံကို ပွုတျပေးပါ။ အကကျြလညျးညီစေ၊ ပြော့လညျးမပြော့စအေောငျ သတိထားပွီး ပွုတျပွီးရငျ ခေါကျဆှဲပွုတျအိုးကိုခပြွီး ရသှေနျပါ။
ခေါကျဆှဲတှကေို စကာနဲ့ စဈယူပွီး ရအေေးအေးနဲ့ သသေခြောခြာနှံ့စပျအောငျ ဆေးပေးပါ။ ပွီးတော့မှ စကာနဲ့ ရစေဈထားလိုကျပါနျော။ ပဲပငျပေါကျကိုလညျး ရနှေေးဖြောပွီး ရစေဈထားပေးပါနျော
ဟငျးရညျအိုးတညျခွငျးအသားနှငျထားပွီးတဲ့ အရိုးတှကေို ငရုတျဆုံထဲ မညကျတညကျထညျ့ထောငျးပွီး အရိုးတှကေို ဇလုံးထဲထညျ့ပွီး အရိုးထောငျးရကေို အိုးတဈလုံးထဲ စဈယူပါ။ ပွီးတော့မှ အဲ့ဒီအရိုးရထေဲကို ဆား၊ သကွား၊ အခြိုမှုနျ့အနညျးငယျထညျ့ပွီး မီးဖိုပျေါတငျပွီး ပေးဆူပါနျော။ ဆူလာပွီဆိုရငျ ဟငျးအိုးထဲကို ခုနက နှငျထားတဲ့ အသားဖတျလေးတှထေညျ့၊
ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ငရုတျကောငျးမညကျတညကျထောငျးတို့ကို ထညျ့ပွီး ပေးဆူပါ။ နောကျတဈကွိမျဆူရငျတော့ ကျောရညျဖြျောထားတာတှကေို ထညျ့ပွီး မှပေေးပါ။
ကျောရညျတှေ လုံးခဲသှားတာမြိုး ဖွဈမသှားအောငျ သသေခြောခြာလေး မှပေေးပါနျော။ ပွီးရငျတော့ မီးအေးအေးနဲ့ ဖွေးဖွေးခငျြး ဟငျးအိုးဆူအောငျ တညျထားပေးပါနျော။
ဟငျးအိုးထဲကို ပနျးမုနျလာပှငျ့နဲ့ မုနျညငျးကို စားခါနီးမှ ထညျ့စားနိုငျပါတယျနျော။ အရသာကိုတော့ ကိုယျကွိုကျတဲ့အနလေောကျမှနျးပွီး ထညျ့ထားပါနျော။
မီးဖိုပျေါ ဒယျအိုးလေးတငျ၊ ဆီထညျ့၊ ဆီပူလာပွီဆိုရငျတော့ နနှငျးမှုနျ့လေးနညျးနညျးခပျပွီး အသငျ့လှီးထားတဲ့ ကွကျသှနျဖွူနီကွျောတှကေို ထညျ့ကွျောပါနျော။ မီးမပွငျးစဘေဲ အသငျ့အတငျ့နဲ့ အကကျြညီအောငျကွျောပါ။ ရှဝေါရောငျသနျးလာပွီဆိုရငျတော့ မီးဖိုပျေါကနေ ဒယျအိုးကိုခပြွီး ကွကျသှနျကွျောတှကေို ပနျးကနျလုံးတဈလုံးထဲ ဆယျယူပါနျော။
မီးအုံးထားတဲ့ ငါးပိစိမျးစားထဲကို ကွကျသှနျဖွူထောငျးလေးထညျ့၊ သံပုရာရညျရှဲရှဲလေးဆမျးပေးပါ။ ရဆေေးပွီးသား ငရုတျသီးစိမျးလေးတှကေို မထူမပါးလေးလှီး၊ ဆား၊ သကွားနဲ့နယျပွီး သံပုရာရညျလေးနဲ့ နယျပေးထားပါနျော။
အားလုံးအသငျ့ဖွဈပွီဆိုရငျတော့ ပနျးကနျလုံးထဲကို ခေါကျဆှဲထညျ့၊ ကျောရညျထညျ့၊ အသား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြှထညျ့ပါ။ ပဲပငျပေါကျရနှေေးဖြောထညျ့၊ ပွီးတော့ ငရုတျကောငျးမှုနျ့လေးဖွူး၊ ကွကျသှနျကွျောလေးထညျ့၊ တရုတျနံနံလေးထညျ့ပွီး ပှဲပွငျပေးပါ။
ပွီးရငျတော့ ငါးပိမီးကငျသံပုရာရညျဆမျး၊ ငရုတျခဉျြလေးနဲ့ တှဲဖကျပွီး ပူပူနှေးနှေးလေး သုံးဆောငျပါနျော။လေးစားလြှကျ
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ချက်နည်းလေးပါ အဆင်ပြေအောင် (2) နည်းတင်ပေးထားပါတယ်နော်
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကြက်သား ၊ မှိုခြောက် ၊ ပန်းခြောက် ၊Sausage(ကြိုက်လို့တမင်ထည့်တာပါ၊ သာမန်အားဖြင့်မထည့်စားတတ်ကြပါဘူး ) ၊ ကော်မှုန့် ၊ ဘဲဥ ၊ ကန်စွန်းရွက် ၊ ပဲငံပြာရည် ၊ ဆား ၊ သကြား နဲ့ ရေတို့ အဓိက လိုအပ်ပါတယ် ။ ငရုပ်ကောင်း ၊ ကြက်သွန်ကြော်နဲ့ ငပိထောင်းလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ် ။
ပထမဆုံး ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ပျော့အိလာစေဖို့ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေထဲ ခဏနှစ်ထားပေးရပါမယ် ။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနေထား အပျော့မာကိုကြည့်ပြီး ခေါက်ဆွဲကို ပြန်ဆယ်ထားကာ …ရေအေးထဲ နှစ်ပြီး ခဏ အအေးခံထားရပါမယ် ။
ကျွန်မကတော့ ရေအေးနဲ့ အအေးခံတဲ့အပြင် ၊ ရေအေးထဲက ဆယ်ပြီးသား ခေါက်ဆွဲကို စကာထဲထည့်ပြီး …ရေခဲတုံးတွေပါ ခေါက်ဆွဲပေါ်တင်ပြီး … အအေးခံထားလိုက်ပါတယ် …. ။
အဲ့လိုမှ အအေးမခံလျှင် ၊ ခေါက်ဆွဲတွေလုံးထွေးပြီး ကပ်ကုန်နိုင်တာကြောင့်ပါနော် ။
ပြီးတာနဲ့ ဟင်းရည်အတွက် ကြက်သားကို …ပဲငံပြာရည် ၊ ဆား ၊ သကြားနယ်ပြီး … နူးနေအောင် ပြုတ်ပေးရပါမယ် ။ ကြက်သားနူးပြီဆိုလျှင် အသားတွေကို ဆယ်ပြီး အတုံးသေးလေးတွေဖြစ်အောင် နုတ်နုတ်စင်းပေးရပါမယ် ။
ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲကိုစင်းထားတဲ့အသားတုံးတွေပြန်ထည့် ပြီးလျှင်ကော်မှုန့်ကို ရေနဲ့ ဖျော်ပြီး လိုသလောက်ထည့်ကြရပါမယ် ။
အဲ့ဒီနောက် မှိုခြောက် ၊ ပန်းခြောက်နဲ့ ၊ sausage တွေကိုလည်း လိုသလောက်လေးထည့်ပေးရပါမယ် …
ပြီးတာနဲ့ ကြက်ဥ နှစ်လုံးကို အကာရော ၊ အနှစ်ပါရောမွှေထားတဲ့ အရည်ကို ….ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းအိုးထဲ ဇွန်း တစ်ဇွန်း နဲ့ .. ဖြည်းဖြည်း ချင်း လောင်းထည့်ပေးရပါမယ် ။ ဒါမှသာ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ အိုးထဲ ကျလာတဲ့ ဘဲဥအရည်က အမျှင်လေးတွေ ဖြစ်စေမှာပါ ။
ဆား ၊ သကြား လိုသလောက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ … ငရုပ်ကောင်းလေးနည်းနည်း ဖြူးထည့်ပေးကြရပါမယ် ။
ငရုပ်ကောင်းနံ့လေးမွှေးလာတာနဲ့ ဟင်းရည်အိုးကို မီးပိတ်ပြီး ကန်စွန်းရွက်တွေကို အပေါ်က ဖြန့်ထည့် ၊ အဖုံး ပြန်အုပ်ထားရပါမယ် ။(တစ်ချို့က ငရုပ်ကောင်းကို ပန်းကန်ထဲရောက်မှ လိုသလိုလည်း ထည့်စားတတ်ကြတယ်) ။
ဟင်းအိုးမီးပိတ်ပြီးမှ ၊ ကန်စွန်းရွက်ကို နောက်ဆုံးမှ ထည့်တာ ၊ စိမ်းနေအောင်လို့ပါ ကန်စွန်းရွက် နွမ်းသွားလျှင် စားချင်စရာမကောင်းတော့လို့ပါ ။
သုံးမိနစ်လောက်ကြာတာနဲ့ ဟင်းရည်အိုး အပူရှိန်ကြောင့် ကန်စွန်းရွက်လည်း စားလို့ ရတဲ့ အနေထား ရောက်ပါပြီ ။ဒါဆိုလျှင် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ အတွက် ဟင်းရည်ချက်လို့ ပြီးပါပြီ ။
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲနဲ့တွဲဖက်စားရတဲ့ ငပိထောင်းလေးအကြောင်းလည်း နည်းနည်း ပွားပါဦးမယ် … ။ ငပိထောင်းလုပ်ဖို့ ၊ မျှင် ငပိ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း ၊သံပုရာသီး ၊ ငရုပ်သီးမှုန့် နည်းနည်းနဲ့ … ၊ အသားမှုန့် နည်းနည်း လိုပါတယ် ။
ပထမဆုံး မျှင် ငပိကို ကင်ရပါမယ် ။ ကင်တဲ့ နေရာမှာ တူးနေအောင်မကင်ပဲ ၊ မျက်နှာပြင် နီရဲပြီး ၊ ငပိနံ့လေးထွက်လာလျှင်ရပါပြီ။ ပြီးတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုပ်သီးစိမ်းကို ကြေညက်နေအောင် ထောင်းထားရပါမယ် ။
ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတော့ မထောင်ခင် အရင်ဆုံး အညှောင့်ချွေပြီး ၊ ဒယ်အိုး အပူထဲ ထည့်လှော်ပေးရပါမယ် ။ လှော်နေတုန်း မီးအရှိန်နဲ့ ငရုတ်သီးက ထပေါက်ပြီး စင်တတ်တဲ့အတွက် မျက်စိထဲမ၀င်အောင် သတိတော့ထားလှော်ရမှာပါ ။
အဲ့ဒီငရုပ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို လိုသလောက်ရောပြီးထောင်းရပါမယ် ။ ကြေညက်လာတာနဲ့ငပိကိုပါ ထပ်ပေါင်းထည့်ထောင်းပေးရပါမယ် ( ငပိထောင်းပိုပြီးစားလို့ကောင်းဖို့ ပုစွန်ခြောက်လေး နည်းနည်းပါထည့်ထောင်းလျှင် ပိုကောင်းပါတယ် )
ငရုပ်သီးအကျက်မှုန် နဲ့ ၊ အသားမှုန့်တို့ကိုပါ ရောထောင်းပြီးပြီဆိုလျှင် ၊ ငပိထောင်းလည်း စားဖို့ အသင့်အနေထားရောက်ပါပြီ ။ သံပုရာသီးကိုတော့ စားခါနီးမှ ငပိထောင်း အပေါ်ကနေ အရည်ညှစ်ပြီး တွဲစားပေးရမှာပါ ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်လျှင် သံပုရာရည်က ချဉ်အရသာထက် ၊ ခါးဖန့်ဖန့် အရသာ ဘက်ကို ပြောင်း သွားနိုင်လို့ပါပဲ ။
လတ်ဆတ်တဲ့ သံပုရာနံ့လည်း မမွှေးတော့တာကြောင့်ပါ ။ အားလုံးလည်းပြင်ဆင်ပြီးလို့ စားဖို့ အသင့်အနေထားရောက်ပြီဆိုတော့ …. ၊ အအေးခံပြီးရေစစ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကို အလျှင်ထည့်ရပါမယ် ၊ ပြီးတာနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ကော်ရည်ကိုလောင်းထည့်ပြီး ၊ အပေါ်က ကြက်သွန်ဆီချက်လေး ဖြူးပေးလိုက်လျှင် အိုကေပြီပေါ့နော် ။
၀က်/ကြက်/ဘဲ ကြိုက်နှစ်သစ်ရာအသား၊ ကော်မှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ မုန်ညင်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ တရုတ်နံနံ၊ ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်၊ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ငါးပိစိမ်းစားနဲ့ သံပုရာသီးတို့ပါနော်။
ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အသားအရိုးတွဲလျက်ကို သန့်စင်အောင်ရေဆေးပြီး အတုံးခပ်ကြီးကြီးတုံးပြီး ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်၊ ချင်းထောင်းရည်တို့နဲ့နယ်ပြီး ခဏနှပ်ထားပေးပါနော်။ ပြီးတော့မှ အိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး အသားတွေကိုထည့်၊ ရေကိုလည်း အသားမြုပ်ရုံထည့်ပြီး ပြုတ်ပေးထားပါနော်။
ပထမတစ်ရေခမ်းလောက်ပြီဆိုရင်တော့ အသားတွေကို ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့ ရေထပ်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ။ အသားနူးလောက်ပြီဆိုရင်တော့ အိုးထဲကနေ အသားတွေကိုဆယ်၊ အအေးခံပြီး အသားနွှင်ပေးထားပါနော်။ ကော်မှုန့်ကိုတော့ စားမယ့်လူရယ်၊ ကော်ရည်အပျစ်အကျဲအကြိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဖျော်ပေးပါနော်။
ကော်မှုန့်ဖျော်တဲ့အခါမှာ ဆား၊ သကြားနဲ့ အချိုမှုန့်လေးနည်းနည်း ထည့်ဖျော်ပေးပါ။ မုန်ညင်း၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ပန်းဂေါ်ဖီတို့ကိုလည်း ရေနဲ့သေသေချာချာ အထပ်ထပ်ဆေးပြီး လှီးချွတ်ရေစစ်ထားပေးပါနော်။ ငါးပိစိမ်းစားကိုလည်း မီးလေးအုံးထားပေးပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း ရေဆေးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနီတို့ကိုလည်း အခွံနွှာပြီး ဆီချက်ချက်ဖို့ ပါးပါးလှီးပေးထားပါ။
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ခြင်းအားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အိုးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ရေနွေးအိုးတည်ပါ။ ရေနွေးဆူပြီဆိုရင် ခေါက်ဆွဲ/ကြာဇံကို ပြုတ်ပေးပါ။ အကျက်လည်းညီစေ၊ ပျော့လည်းမပျော့စေအောင် သတိထားပြီး ပြုတ်ပြီးရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်အိုးကိုချပြီး ရေသွန်ပါ။
ခေါက်ဆွဲတွေကို စကာနဲ့ စစ်ယူပြီး ရေအေးအေးနဲ့ သေသေချာချာနှံ့စပ်အောင် ဆေးပေးပါ။ ပြီးတော့မှ စကာနဲ့ ရေစစ်ထားလိုက်ပါနော်။ ပဲပင်ပေါက်ကိုလည်း ရေနွေးဖျောပြီး ရေစစ်ထားပေးပါနော်
ဟင်းရည်အိုးတည်ခြင်းအသားနွှင်ထားပြီးတဲ့ အရိုးတွေကို ငရုတ်ဆုံထဲ မညက်တညက်ထည့်ထောင်းပြီး အရိုးတွေကို ဇလုံးထဲထည့်ပြီး အရိုးထောင်းရေကို အိုးတစ်လုံးထဲ စစ်ယူပါ။ ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီအရိုးရေထဲကို ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ပေးဆူပါနော်။ ဆူလာပြီဆိုရင် ဟင်းအိုးထဲကို ခုနက နွှင်ထားတဲ့ အသားဖတ်လေးတွေထည့်၊
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်ကောင်းမညက်တညက်ထောင်းတို့ကို ထည့်ပြီး ပေးဆူပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆူရင်တော့ ကော်ရည်ဖျော်ထားတာတွေကို ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
ကော်ရည်တွေ လုံးခဲသွားတာမျိုး ဖြစ်မသွားအောင် သေသေချာချာလေး မွှေပေးပါနော်။ ပြီးရင်တော့ မီးအေးအေးနဲ့ ဖြေးဖြေးချင်း ဟင်းအိုးဆူအောင် တည်ထားပေးပါနော်။
ဟင်းအိုးထဲကို ပန်းမုန်လာပွင့်နဲ့ မုန်ညင်းကို စားခါနီးမှ ထည့်စားနိုင်ပါတယ်နော်။ အရသာကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေလောက်မှန်းပြီး ထည့်ထားပါနော်။
မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးလေးတင်၊ ဆီထည့်၊ ဆီပူလာပြီဆိုရင်တော့ နနွင်းမှုန့်လေးနည်းနည်းခပ်ပြီး အသင့်လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီကြော်တွေကို ထည့်ကြော်ပါနော်။ မီးမပြင်းစေဘဲ အသင့်အတင့်နဲ့ အကျက်ညီအောင်ကြော်ပါ။ ရွှေဝါရောင်သန်းလာပြီဆိုရင်တော့ မီးဖိုပေါ်ကနေ ဒယ်အိုးကိုချပြီး ကြက်သွန်ကြော်တွေကို ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲ ဆယ်ယူပါနော်။
မီးအုံးထားတဲ့ ငါးပိစိမ်းစားထဲကို ကြက်သွန်ဖြူထောင်းလေးထည့်၊ သံပုရာရည်ရွှဲရွှဲလေးဆမ်းပေးပါ။ ရေဆေးပြီးသား ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကို မထူမပါးလေးလှီး၊ ဆား၊ သကြားနဲ့နယ်ပြီး သံပုရာရည်လေးနဲ့ နယ်ပေးထားပါနော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ပန်းကန်လုံးထဲကို ခေါက်ဆွဲထည့်၊ ကော်ရည်ထည့်၊ အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျှထည့်ပါ။ ပဲပင်ပေါက်ရေနွေးဖျောထည့်၊ ပြီးတော့ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးဖြူး၊ ကြက်သွန်ကြော်လေးထည့်၊ တရုတ်နံနံလေးထည့်ပြီး ပွဲပြင်ပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ ငါးပိမီးကင်သံပုရာရည်ဆမ်း၊ ငရုတ်ချဉ်လေးနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ပူပူနွေးနွေးလေး သုံးဆောင်ပါနော်။လေးစားလျှက်
ကိုယျခံစှမျးအား ကောငျးစမေညျ့ ကွကျပေါငျး ဟငျးရညျ ပွုလုပျနညျး